I-Semalt Expert: Indlela Yokuhlala Ukhuseleke kwi-Botnets?
I-intanethi yezinto (IoT) iteknoloji entsha enoxanduva lokuxhuma amacebo ahlukeneyo kunye nezinto kwi-intanethi. Ikwabonelela ngolwazi olufanelekileyo malunga nokusebenza kakuhle kwekhompyuter yakho okanye ifowuni yeselula. Kulo mzabalazo weemveliso ezikhuphisanayo, abasebenzisi kunye nabavelisi baye bavelisa iindlela ezithile eziyingozi, kubandakanywa neebhodnetshi.
I-Artem Abgarian, ingcali ephezulu esuka kwi-10 (Semalt , igxininise ukuba i-botnets yinkampani ye-intanethi exhunyiwe kwi-Intanethi okanye ezixhobo eziphathekayo ezilawulwa yiseva okanye inkqubo. Eli gama lisetyenziselwa ukudibanisa kunye neentsimbi ezithile, ngokukodwa i-Distributed Denial of Attacks Attacks (ukuhlaselwa kweDDoS).
Benza njani abaqhibi?
Ngoxhaswa ngama-botnets kunye namakhulu ukuya kumawaka eikhomputha ezithelelekileyo, abahlaseli banokulandelela kalula idilesi yakho ye-IP - cursos de fotoperiodismo online. Basebenzisa iidilesi zabo ze-IP ezahlukileyo ukuhlukanisa abasebenzisi abafanelekileyo kunye nabangendawo. Xa sele befumene iikhomputha zee-computer kunye nee-IP zamakheli, iinjongo zabo ezilandelayo ziza kubachaphazela ezo zixhobo ukuze zenze imisebenzi yazo.
Ingozi # 1: Bamba imininingwane yakho
I-intanethi yezinto ingaba lula ukuba iinkcukacha zakho kunye nedatha yangasese. Basebenza kunye okanye ngaphandle kwezibhenca ezimbi kwaye bajonge imisebenzi yakho ngokucebile. Emva kokungena kwi-system yakho, baqala ukuqhuba imisebenzi yabo kwaye baxake idivayisi yakho ngexesha..
Ingozi # 2: Izixhobo ezingabizi kakhulu ngakumbi ii-PC
Iimarike zikhutshwe ngeekhompyutheni ezithengi kwaye ezingabizi kwaye zixhobo eziphathekayo, ii-webcams, i-thermostats, i-yoga mats, i-fry pans kunye nabagadi babantwana. Kufuneka ugweme ukuthenga nantoni na engaphakamanga kumakishi, kwaye oko kungowomfanekiso ongaqhelekanga okanye ongaziwa. Oku kungenxa yokuba iingozi ezihlukahlukeneyo zidibaniswe nezixhobo ezinjalo. Iibhenets ziyakwenza ukuba babe ngamaxhoba ngokunciphisa ulwazi lwabo. Zonke ezi zixhobo kufuneka zidibaniswe kwi-intanethi kwaye zine-IPs yazo ezahlukileyo. Ngomncinane okanye kungekho ukhuseleko, unokulahlekelwa ukufikelela kwakho kumadivayisi akho, kwaye abahlaseli bangase batshale amagama abo abasebenzisi kunye namaphasiwedi ngaphandle kwexesha.
Ingozi # 3: Akukho khuseleko olwakhiwe-akukho ukufikelela kwisixhobo sakho
Ukufaka inkqubo ye-anti-malware okanye isoftware ye-antivirus kubalulekile. Kufuneka uqaphele rhoqo imisebenzi yakho kwi-intanethi kwaye ube neefayili zokugcina ezigcinwe. Gcina iliso kwiimpawu zokukhusela kwaye ungakhohlwa ukugcina zihlaziywa. Kwakhona, kufuneka ube nephasiwedi eqinileyo ngamagama amaninzi kunye namancinci ukuze kungabikho mntu uyayicinga ngokulula. Emuva ngo-2016, ii-botnets zonakalise inani elikhulu lamacebo kuphela ngenxa yokuba amaphasiwedi abo kulula ukuqiqa. Ngokomyinge, izixhobo ze-IoT zamawaka ezilishumi zaye zanyanzeliswa kwaye zahanjiswa kubanikezeli beziseko ze-intanethi zokugcinwa. Kwaye kwahlaselwa amawebhusayithi afana ne-Twitter kunye ne-Netflix, kwaye abahlaseli balala ngokukhawuleza kwi-intanethi emva kokwenza ubugebengu.
Iibhentshi ezenzile le mi sebenzi zenziwe nge-malware ethile ebizwa ngokuba ngu-Mirai. Le malware inexanduva lokuba idatha yangasese kunye neephasiwedi zeenombolo ezininzi zezixhobo. Kwakungekho i-malware ye-genius, ngoko ke amanyathelo okulwa nalo ayenokuthathwa. Ukuhlaselwa kwe-DDoS kufana nokuxhaphaka kwaye rhoqo njengoko i-bots kunye nezicabungulu. Zangena kwiikhompyutha kunye nezixhobo zeselula, zicela abasebenzisi ukuba banqakraza kwiimpapasho zobuqhetseba kwaye bahlole iindawo ezibandakanyekayo.